Dalka iyo dareenkayga W/Q Axmed Ismaaciil Maxamuud | FooreNews
Home Barnaamijo Dalka iyo dareenkayga W/Q Axmed Ismaaciil Maxamuud
Dalka iyo dareenkayga W/Q Axmed Ismaaciil Maxamuud
FoorenewsAug 01, 2012Barnaamijo, Sheekooyin0
Damaq iyo xasuus,
Dambas iga dhig-yey,
Muddo aan yarayn aragaygu wuxuu u basaasay ku il-doogshada dalka iyo khayraadkiisa, dhegahayguna waxay u buseeleen maqalka haasaawe bulsheedka inta badan ka dhaca goobaha lagu kulmo, halka ay laabtayduna u heellanayd, una hanqal taagaysay mar ku hoyashada hoygii fanka iyo Hargaysa cadey.
Haddaba, waxaan dhawroon, dharaar tiriyoon, u dheg-taagaba, galab dhawayd ayuun bay ahayd markii aan ku dheel-maday ceelkii Hargaysaad. Cirka waxa ku shaqlanaa daruuro mad-madaw oo leh mid qaadaysa, mid hooraysa iyo mid god-lasho isku diyaarinaysa. Daruuruhu duulaamo joogto ah ayay ku jiraan, waxaanay baqe-galin ku hayaan boodhka iyo buska xagaayadu kicinayso ee magaalada Hargaysa ka taagan. Cartankooda iyo is hirdigooda waxa ka dhalanaya maayado danabeed oo leh onkod gaw leh iyo hilaac galalac leh. Habraha iyo intii dariiqo ahi waxay danabka ka hoos galayaan: “Salaama qawla min rabbi raxiin”. Intii kalena dhaw dhawdu uma dhacsana.
Saymo-roobaadka kuu muuqda iyo saxan-saxada udgoon ee ku saaqaysaa waxay miridho ku sadqaynayaan xumaddii iyo xanuunkii dal-tabyo ee ay dibaduhu ku badeen. Ufada macaan ee ku maraysaa waxay sanbabkaaga ka nadiifinaysaa wasakhawgii haweed ee aad muddaba quudanaysay, halka dhibica roobaad ee dhakadaada ku dhanbalmayaana uu bakhtiinayo dhinbiilihii iyo kulkii kaa soo raacay magaalada Qaahira. Adiga oo aan is ogayn kal iyo kab waxa ku dhamaynaya beeraq, waxaanad ku dhawaanaysaa inaad sida caruurta iska hadaaqdo beer nugayl daraadeed.
Dhaayuhu waxay qaadayaan sawiro hortayda ka muuqda oo aan qormooyin kale idiinku soo gudbin doono, haddii aan wax yar ka sii xusana raggu in gotay, in gaboobay, in gadheeyay iyo goobeeyayba waa leeyihiin. Haweenkuna in habroobay, in hilaacay iyo in hagaasayba waa leeyihiin. Halka dhalaankuna wiilal iyo gabdhaba cirkaa oo dhar loo galiyay noqdeen.
Maskaxda qaybta xusuusta qaabilsani galabtan sida cirku u da’ayo ayay iyaduna u dihanaysaa oo waxay soo burqanaysaa xidhmooyin xiisahooda iyo xanuunkoodaba leh. Goob walba, geed walba iyo gidaar walba waxaad ku dhawaanaysaa inaad gacan qaado, waxaanay kugu soo kicinayaan xusuuso xallad iyo xaraabo lahaa, waxay ku hor keenayaan dhacdooyin dhallin-yarnimo oo maankaaga ku duugnaa.
Kobtani waa halkii ugu horaysay ee aan gabadh kula ballamay toban sanno ka hor, uguna dhiibay dhanbaal caashaq oo dherer iyo dhumucba lahaa, dulucdiisuna daarnayd: Waxaan sidaa kalgacal, aan kula sugaayee, kugu simaye illa qabo. Geedkan mirimirida ah hadh-qoodaalkiisa ayaan taagnaa fiidkaa kulka iyo kalgacalku i hayay. Dhanka galbeed markii ay igaga soo baxday iyada oo laaf-yoonaysa sidii aan isku dhex dhigtay ee aan dhidid hooraya u noqday, gacan qaadkii naxariista lahaa iyo baabacadii dhaylada ahayd baanan illaa hadda ilaawayn. Gaatinteedii iyo garbo ka socodkeedii ay hablaba kaga duwanayd baa illaa hadda ii muuqda.
Dhanbaalka markii aan gudoonsiinayay farxad xishoodkii foolkeeda ka muuqday iyo afkii ay gacanta ku haysay baa illaa hadda ii sawiran. Aaaah, ku talo gal la’aan bay dhaayahaygu fiirinayaan dhankii ay fiidkaa igaga timid, waxaanay dhawrayaan dhool galbeed ka muuqda. Tolow ma sugaa illaa inta ay gaadhayso saacaddii aannu balansanayn fiidkaa? Mase laga yaabaa inay timaad iyada oo gaatinaysa? Haddiise ay timaad halkee baan ka bilaabaa hadalka? Aaaah, mooyi.
Axmed Ismaaciil Maxamuud (Axmed De
Previous PostWeerar Bambo-gacmeed oo caawa lagu weeraray Guriga Maayarka cusub ee Laascaanood Next PostShimbir Dhaawac Hawada Sare Ugu Gaysatay Diyaarada Siday 151 Qof Oo Rakaab Ah Una Kala Gooshaysay Gudaha Wadanka Maraykanka